LGBT လိင်ပြောင်း ကလေးကစားစရာအရုပ်ကြောင့် မိဘတွေဒေါသထွက် by popolay.com
LGBT လိင်ပြောင်း ကလေးကစားစရာအရုပ်ကြောင့် မိဘတွေဒေါသထွက်
16 Jan 2020 1,177 Views
ကမ္ဘာပေါ်မှာ ပထမဦးဆုံးလို့ ယူဆမယ်ဆိုရင် ယူဆလို့ရနိုင်မယ့် LGBT လိင်ပြောင်း ကလေးကစားစရာအရုပ်ကို ရုရှားနိုင်ငံရှိ အရုပ်ဆိုင်တစ်ဆိုင်တွင် ရောင်းချနေခဲ့တာကို တွေ့ရှိပြီးတဲ့နောက်မှာ အဆိုပါအရုပ်နဲ့ ပက်သက်ပြီး မိဘတွေကြား ဒေါသထွက်ကာ အငြင်းပွားမှုတွေ ဖြစ်ပေါ်ခဲ့ပါတယ်။
ပုံတွင်ဖော်ပြထားသည့်အတိုင်း မိန်းကလေး အဝတ်အစားအပြင်အဆင်နှင့် ယောက်ျားလေး လိင်တံ ပါရှိသည့် လိင်ပြောင်းလဲ LGBT အရုပ်ကို နိုဗိုဆီဘရစ်မြို့ရှိ အရုပ်ကမ္ဘာ ကလေးအရုပ်များ ရောင်းချသည့်ဆိုင်တွင် တွေ့ခဲ့ရခြင်းဖြစ်သည်။ ယင်းအရုပ်၏ ဓါတ်ပုံများ အွန်လိုင်းပေါ်မှာ ပျံ့နှံ့ခဲ့ပြီးနောက် အငြင်းပွားမှုများ စတင်ခဲ့သည်။
ရုရှားနိုင်ငံဟာ LGBT အခွင့်အရေးနဲ့ပက်သက်ပြီး တင်းကျပ်စွာထိန်းချုပ်ထားတဲ့ နိုင်ငံဖြစ်တာကြောင့် ကလေးကစားစရာအရုပ်ကို အခုလို ပြုလုပ်ထားတဲ့အပေါ် ယမ်းပုံမီးကျ ဒေါသထွက်နေကြခြင်းဖြစ်သည်။
“ဒီလိုအရုပ်မျိုးက ကလေးတွေအတွက် ဖြစ်သင့်သလားဗျာ.. ပြောစမ်းပါဦး” ဟု တစ်ဦးက ဒေါသဖြင့် မေးခွန်းထုတ်လိုက်သည်။ နောက်တစ်ဦးက “လုပ်သင့်တာကတော့ ဆေးသေတ္တာတစ်လုံးဝယ်ပြီး အဲ့ဒါမျိုးကို ဘယ်လိုဖြတ်ပစ်ရလဲဆိုတာ သင်ပေးလိုက်” လို့ တုံ့ပြန်ခဲ့ပါတယ်။
တစ်ချို့ကလည်း အရုပ်စက်ရုံက ယောကျ်ားလေးခန္ဓာကိုယ်ကို မိန်းကလေးအရုပ်ခေါင်းနဲ့ မှားတပ်မိတာဖြစ်နိုင်ကြောင်း ဖြေတွေးကြပေမယ့်လည်း အချို့ကတော့ ဒါဟာ ကျုပ်တို့ရဲ့ လူမှုပတ်ဝန်းကျင်ကို သွေးတိုးစမ်းတာလို့ မှတ်ချက်ပေးနေကြပါတယ်။
၂၀၁၈ ခုနှစ်တုန်းက အာဂျင်တီးနားမှာရှိတဲ့ Toy R Us အရုပ်ဆိုင်မှာ လိင်ပြောင်းအရုပ်တွေ ရောင်းချခဲ့တာနဲ့ ပက်သက်ပြီး သဘောထားအမြင်တွေကို စမ်းစစ်ခဲ့ကြပါတယ်။ ၂၀၁၉ ခုနှစ်မှာတော့ လိင်ပြောင်းထားတဲ့ ပထမဆုံး ဘာဘီရုပ်ကို ကုမ္ပဏီက ကြေညာခဲ့ပါတယ်။
မည်သို့ပင်ဖြစ်စေကာမူ ဘာမှနားမလည်သေးတဲ့ ကလေးတွေအတွက် အခုလို LGBT အရုပ်တွေက စိတ်ထွေပြားစေနိုင်သလား..? သင့်လျော်ရဲ့လား..? ဆိုတာကို မိဘတွေရဲ့ ထင်မြင်ချက်လေး ရေးခဲ့ကြပါဦး..။